Izinto esingase sicabange ngendawo yokugcina yasekhaya noma yamafu yekhamera ye-IP
Uma ukhathazeka nge-burglar black ekhaya lakho bese weba okuthile okubalulekile endlini yakho. Ikhamera ye-IP WIFI ingaba ukukhetha kwakho. Kungaba li ...
Uma ukhathazeka nge-burglar black ekhaya lakho bese weba okuthile okubalulekile endlini yakho.Ikhamera ye-IP WIFI kungaba ukukhetha kwakho. Ingaxhunyaniswa kunethiwekhi. Inemisebenzi efanaUkutholwa kokunyakaza, umbono wobusukufuthi Ukukhonjwa kobuso. Uma nje ithola noma yini esolisayo, izokulahla abasebenzisi ngemiyalezo yokucindezela noma ukuqwashisa ngohlelo lokusebenza ngokushesha. Ngakho-ke sikuthola kuwusizo kakhulu futhi kulula.
Okwamanje, amakhamera we-IP aphambili asebenzisa ukulandela izinto ezimbili zokugcina amavidiyo. Eyokuqala ukubhala amavidiyo abe endawo. Enye indawo yokugcina ividiyo efwini. Ke, iyiphi engcono? Kuya ngezidingo zakho. Ngakho-ke namuhla ake sibheke lezi zindlela ezimbili zokugcina.
Njengezinto eziningi ezivamileAmakhamera we-IP, bonke basekela ukugcinwa kwasendaweni. Ngokuyisisekelo basebenzisa ikhadi le-Micro SD futhi bangase max. Ukusekelwa kwe-128GB. Abasebenzisi bangasetha imodi yerekhodi njengokuqoshwa kwe-loop nomaUkuqoshwa kokutholwa kokuhamba. Lapho i-SD igcwele, amavidiyo amasha azomboza abadala uma ukhetha imodi yokurekhoda ye-loop. Kepha isitoreji sendawo sisewukukhetha okuhle, ngoba akudingeki ukhathazeke ngevidiyo yakho izophuma yizinkampani zokugcina ifu. Futhi futhi ukugcinwa kwasendaweni kumahhala. Akudingeki ukhokhe izikweletu.
Kulezi zinsuku, amakhamera amaningi amasha we-IP asekela isitoreji samafu. Kepha njengoba ngishilo isikhashana esedlule, udinga ukukhokha imali yenkonzo. Kakhulu mhlawumbe 65rmb ngenyanga. Izinzuzo ukuthi awudingi ukukhathazeka ngosayizi wekhadi lememori. Futhi amanye amavidiyo abalulekile awakwazi ukumbozwa. Noma kunjalo, isitoreji samafu sinezingozi ezithile. Abaduni bayi-Omnipotent ngemuva kwakho konke. Ukuvuza komsebenzisi we-Intanethi kungukukhathazeka okuvamile.
PHAMBI Isikhathi Samahlaya - Ukuzijabulisa nje
Ungayikhetha Kanjani Ikhamera ye-IP OLANDELAYO